Bixi Lacagta Muddada ah: Kireyso khadka tooska ah Qorahaaga Qormada ee Soomaaliya
Bixi Lacagta Muddada ah ee Soomaaliya si loogu guuleysto natiijooyinka laba jeer ka dhakhso badan!
Qorayaal aqoonyahano aqoon leh iyo 24/7/365 taageero, ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya! Waxaan bixinnaa Adeegyada Lacag Bixinta Muddada iyo daryeelka waqtigaaga iyo asturnaantaada
Sidee Loogu Bixiyaa Waraaqaha Muddada Khadka Tooska ah
Markaad go'aansato inaad ku bixiso waraaqaha muddada-dheer ee khadka tooska ah ee adeeg-bixiye, waxaa lagaa doonayaa inaad la sameysatid koonto adeeg-bixiyaha, adoo tilmaamaya tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo dalbado warqadda su'aasha ka dibna aad ku dalbato mashruuca iyadoo kuxiran waqtiyada kala duwan nooca iyo kakanaanta shaqada kujirta. Xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaad lacag ka bixiso adeeggan, halka xaaladaha kale adeeg bixiyuhu kuu soo diri karo adiga oo ah adeeg bilaash ah.
Haddii aad rabto inaad ku bixiso kharashka waraaqaha teleefoonka adiga oo adeegsanaya adeeg bixiyahaaga waxaa lagu weydiin doonaa inaad warqadda ku shubto nidaamka. Halkan laga bilaabo waa shaqadaada inaad soo gudbiso dalabyo, soo gudbiso macluumaad kale oo khuseeya oo aad jawaab ka sugto bixiyaha adeegga.
Waxaa jira adeeg bixiyeyaal badan oo bixiya adeegyo khadka tooska ah sida kuwaan. Waa muhiim inaad doorato mid bixinaysa qiime macquul ah oo damaanad qaadaya inay hayaan macluumaad sax ah oo casriyeysan dukumiinti kasta. Tani waxay hubin doontaa in warqadda aad dalbaneysaa ay tahay mid tayo wanaagsan leh iyo in dhammaan dukumintiyada sharciga ah ee aad u baahan tahay inaad ku dhammaystirto hawsha dalabka laguu soo gudbiyo. Sidoo kale, waa inaad hubisaa inaad si dhakhso leh u hesho warqaddaada si aad ugubilaawdo inaad ka shaqeyso arjigaaga isla markaaba.
Markaad ka dalbatid warqaddaada adeegbixiyaha waxay kaa qaadayaan lacag adeegga. Waa inaad isbarbar dhigtaa xigashooyinka ay bixiyaan si loo hubiyo inaad heshid qiimaha ugu fiican. Mararka qaarkood waxay ku siin doonaan qiimo ka hooseeya intaad meelo kale ka heli kartid laakiin isla markaa waxay sidoo kale lahaan karaan taageero adeeg macmiil oo ka wanaagsan haddii aad wax dhibaato ah ku qabtid inta hawshu socoto. Waxay mudan tahay inaad ka hubiso waaxda adeegga macaamiisha ee shirkadda aad damacsan tahay inaad ka dalbato, si loo eego haddii ay jiraan wax cabasho ah oo iyaga ka dhan ah.
Waad abuuri kartaa warqad kuu gaar ah. Tan laguma talinayo inkastoo, maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa howshu inay si dhakhso leh u socoto, gaar ahaan haddii aad horeyba cilmi baaris badan ugu sameysay naftaada tanina waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso in warqaddu ay tahay mid faahfaahsan oo sax ah intii suurtagal ah.
Markaad dhammaystirto warqadda oo aad ku gudbiso bogga adeeg bixiyaha, waxaa lagaa doonayaa inaad saxeexdo heshiiska. Waraaqda kadib waxaa loo dirayaa cinwaanka ku xusan qandaraaska adigana adiga ayay u taalaa inaad u gudbiso wakaalada. Qandaraaska gudahiisa waxaa ku qoran inta saxda ah ee lagaa doonayo inaad keento waraaqaha iyo meesha lagaa doonayo inaad keento. Tani waa in la hubiyo inay jiraan dukumiintiyo aad ku socon karto haddii ay dib u dhac ku yimaado hawsha.
Waa muhiim inaad si faahfaahsan u hubiso bixiyeyaasha ka hor intaadan gaarin go'aanka ugu dambeeya ee ku saabsan midka la adeegsanayo. Waa inaad had iyo jeer hubisaa inaad si taxaddar leh u akhriday shuruudaha iyo shuruudaha si aad u hubiso inaad si buuxda u fahamtay adeegga ka hor intaadan saxiixin heshiiska. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad lahadasho dadka kale ee adeegsiga adeegsaday si aad u ogaato sida ay u dareemeen arintaas kahor intaadan ganacsi la samayn.
Waxaad ubaahantahay inaad xasuusato markaad adeegsaneyso adeegan inaad kaliya la sameyso shirkad sumcad leh oo aad hubiso inaad kaliya adeegsaneyso mar. Haddii kale waxaad isku arki doontaa warqad aan u faahfaahsanayn sidii aad rajaysay. Haddii aad go'aansato inaad rabto inaad ka dalbato warqaddaada adeeg bixiye kale, markaa hubi inay haystaan ​​damaanad qaad ah in waraaqahaaga lagu geynayo xilliyada qaarkood.